Iindaba -Ihlabathi leNokia Bell Labs lirekhoda izinto ezintsha kwi-fiber optics ukwenza amandla akhawulezileyo nangaphezulu kumanethiwekhi e-5G exesha elizayo
Kutshanje, i-Nokia Bell Labs ibhengeze ukuba abaphandi bayo babeke irekhodi lehlabathi kwelona nqanaba liphezulu labaphethe into enye kwimowudi yendlela enye yeekhilomitha ezingama-80, ubuninzi be-1.52 Tbit / s, elingana nokudlulisa i-YouTube yezigidi eziyi-1.5. iividiyo ngaxeshanye. Izihlandlo ezine zetekhnoloji ye-400G yangoku. Eli rekhodi lehlabathi kunye nolunye ugcino lwenethiwekhi ebonakalayo luya kuqhubeka nokukhulisa amandla eNokia okuphuhlisa iinethiwekhi ze5G ukuhlangabezana nedatha, amandla, kunye neemfuno zokugqibela zeIntanethi yento yezinto kunye nokusetyenziswa kwabathengi.
UMarcus Weldon, iGosa eliyiNtloko leThekhinoloji yakwaNokia kunye noMongameli weNokia Bell Labs, uthe: “Oko kwasungulwa iintsinga ezilahlekayo ezisezantsi kunye nezixhobo ezinxulumene nazo kwiminyaka eyi-50 eyadlulayo. Ukusuka kwinkqubo yokuqala ye-45Mbit / s ukuya kwinkqubo yanamhlanje ye-1Tbit / s, inyuke ngaphezulu kwamaxesha angama-20 000 kwiminyaka engama-40 kwaye yenza isiseko sento esiyaziyo njenge-Intanethi kunye noluntu lwedijithali. Indima yeNokia Bell Labs ibisoloko ingumceli mngeni kwaye iphinde ichaze umda onokubakho. Ingxelo yethu yakutshanje kuphando olubonakalayo ingqina ukuba siphinde saqulunqa uthungelwano olukhawulezayo nolunamandla ngakumbi ukwenza isiseko sohlaziyo olulandelayo lweshishini. ”Iqela leNokia Bell Labs Optical Network Research elalikhokelwa nguFred Buchali lenza isantya esinye sethwala eliya kuthi ga 1.52Tbit / s. Le rekhodi isekwe ngokusebenzisa i-128Gigasample / isiguquli sesibini esitsha esinokuvelisa imiqondiso kwinqanaba lesimboli le-128Gbaud, kwaye inqanaba lolwazi lesimboli enye lidlula i-6.0 bits / isimboli / ipolarization. Le mpumelelo yaphule irekhodi le-1.3Tbit / s elenziwe liqela ngoSeptemba 2019.
Umphengululi weNokia Bell Labs uDi Che kunye neqela lakhe basete irekhodi elitsha lerekhodi lehlabathi leelaser zeDML. Ii-lasers ze-DML zibalulekile kwiindleko eziphantsi, usetyenziso olukhawulezayo olufana nokunxibelelana kweziko ledatha. Iqela le-DML liphumelele ngeqondo lokuhambisa ngaphezulu kwe-400 Gbit / s ngaphezulu kwekhonkco ye-15-km, iseta irekhodi lehlabathi.
Iilebhu zisandula ukwenza ezinye iimpumelelo eziphambili kwicandelo lonxibelelwano olubonakalayo.
Abaphandi u-Roland Ryf kunye neqela le-SDM bagqibe kuvavanyo lokuqala lwendawo besebenzisa itekhnoloji yokwahlulahlula indawo ye-multiplexing (SDM) kwitekhnoloji ye-4-core edityaniswe-engaphakathi ehamba ngeekhilomitha ezingama-2 000. Uvavanyo luyangqina ukuba ukudibanisa isiseko sefayibha kubuchwephesha obunokwenzeka kwaye bunokusebenza okuphezulu kokuhambisa, ngelixa kugcinwa umgangatho womzi mveliso we-125um ubukhulu bokubopha.
Iqela lophando elikhokelwe nguRene-Jean Essiambre, uRoland Ryf kunye noMurali Kodialam bazise iseti entsha yeendlela zokumodareyitha ezinokuthi zibonelele ngokuphuculwa kokuhanjiswa komgama kunye nokungahambelani kumgama wenqanawa we-10,000km. Ifomathi yokuhambisa iveliswa yinethiwekhi ye-neural kwaye inokuba ngcono kakhulu kunendlela yesiko (i-QPSK) esetyenziswa kwiinkqubo zekhebula lenkwili yangaphambi kolwandle.
Umphandi uJunho Cho kunye neqela lakhe bangqine ngophando lokuba kwimeko yokunqongophala kwamandla, ngokusebenzisa uthungelwano lwe-neural ukwandisa inzuzo ekubumbeni isihluzi ukufezekisa ukuzuza kwamandla, amandla enkqubo yolawulo lwentambo yolwandle inokunyuswa nge-23%.
INokia Bell Labs izinikezele kuyilo nokwakha ikamva leenkqubo zonxibelelwano ezibonakalayo, ukuqhuba ukuphuhliswa kwefiziksi, izixhobo zesayensi, imathematics, isoftware, kunye netekhnoloji ye-optical ukwenza iinethiwekhi ezintsha ezihambelana neemeko eziguqukayo, nangaphaya kwemida yanamhlanje.